Endrik'io pejy io tamin'ny 30 Novambra 2018 à 12:16
55 octets ajoutés , il y a 1 an
Endrik'io pejy io tamin'ny 18 Mey 2018 à 15:20 (hanova)
k (Anaran'ny boky)
Endrik'io pejy io tamin'ny 30 Novambra 2018 à 12:16 (hanova) (esory)
Ny [[Bokin'i Malakia]] na [[Bokin'i Malakia|Bokin'i Malaký]] dia boky ao amin’ny [[Tanakh]] (Baiboly hebreo) sy ao amin’ny [[Testamenta Taloha]] ao amin’ny [[Baiboly]] kristiana. Isan’ireo atao hoe [[Bokin'ny Mpaminany 12|Mpaminany madinika]] izy. Ahitana ireo tenin’ny mpaminany mahazatra toy ny fampahatsiahivana ny nifidian’Andriamanitra an’i Israely ho vahoakany, ny fahamasinan’Andriamanitra, ny fahamarinana ara-piaraha-monina ary ny tokony hanajana ny fanompoam-pivavahana. Ny hafatra eskatokojika ny amin'ny Andron’i[[Andron'i YahwehIahveh]] dia mikasika an’i Israely ihany fa tsy ny firenena rehetra. Miresaka misimisy momba ny fanambadiana koa ny Bokin’iBokin'i Malakia.
Na dia boky farany ao amin’ny [[Testamenta Taloha]] aza ny Bokin’i Malakia ao amin’ny dikan-tenin’ny Baiboly kristiana, sady farany ao amin’ireo [[Bokin'ny Mpaminany 12|Mpaminany madinika]] (madinika noho ny sorany fohy), ao amin’ny fizaràna faharoan’ny [[Tanakh]] (Baiboly hebreo), tsy izy no nosoratana farany. Ny Bokin’i Malakia dia voasoratra taorian’ny taona 516 tal. J.K., fotoana nanombohan’ny fanompoam-pivavahana tao amin’ny [[Tempolin'i Jerosalema|Tempoly]] (jereo Mal. 1.13), sy talohan’ny nandraràn’i [[Nehemia]] ny fifanambadiana amin'ny hafa firenena (taona 445 tal. J.K.) Mety teo anelanelan’ny taona 460 sy 450 tal J.K. izany no nanoratana ny Bokin'i Malakia.
=== Ny fitiavan’Andriamanitrafitiavan'Andriamanitra ny Israely (1. 1-5) ===
Ny faminaniana voalohany dia manamafy ny fitiavan’Andriamanitra an’i Israely izay vahoaka nofidiny, sy ny tsy fankasitrahany an’i Edoma.
Ny faminaniana fahatelo dia mikasika ny fisaraham-panambadiana sy ny fanambadiana eo amin’ny Jiosy ny hafa firenena ([[jentilisa]]) izay tsy sitrak’Andriamanitra. Tamin’ny alalan’ny fanambadiana jentilisa dia tafiditra sy tsy manaja ny fanekem-pihavanana tao Sinay ny vahoaka jiosy.
=== Ny Andron’iAndron'i YahwehIahveh (2.17 – 3. 5) ===
Ny faminaniana fahefatra dia mikasika ny [[Andron'i Iahveh]] sy manambara ny hiavian’Andriamanitra, izay hitsara ny mpanao ratsy, sy ny hiavian’ny "iraka" (''malakh'') izay hanadio ny raharaham-pisoronana sy ny Tempoly.
=== Ny lalàn’i Mosesy sy ny hiverenan’i Elia (3. 22-24) ===
Ireo tovana roa dia mamporisika indray ny vahoaka mba hahatsiaro ny [[Torah|lalàn’i Mosesy]] (4.4) sy manambara fa hirahina ny mpaminany [[Elia]] alohan’ny hiaviana’ny [[andron’iandron'i YahwehIahveh]], izay lehibe sy mahatahotra (4.5).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/958602"